Xaaladda Muqdisho oo caawa mar kale kacsan | KEYDMEDIA ONLINE
Xaaladda Muqdisho oo caawa mar kale kacsan
Saadaq Cumar Xassan ‘Joon’ ayaa galabta ka soo guuray, wadada Jaayga oo ku taalla agagaarka garoonka Aadan cadde oo uu dhawaanahaan deganaa, wuxuuna qorrax gaabkii galabta galay Xaafadda Shiirkole.
MUQDISHO, Soomaaliya - Magaalada Muqdisho ayaa caawa wajaheysa mar kale dhaqdhaqaaq ciidan, kadib markii uu dib ugu laabtay Xaafadda Shiirkole ee degmada Hodan, taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir Saadaqa Cumar Xasan ‘Joon’.
Taliye Saadaq Joon, ayaa afurkii kadib, caawa ka soo baxay xafaddii uu ku sugnaa ee Jayga, oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, kana tirsan degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Ciidamo la rumeysan yahay in ay ka amar qaataan Farmaajo, ayaa galabta la geeyay jidadka gala xaafadda Jaayga ee Saadaq caawa ka soo baxay, waxaana sidoo kale ilo xog ogaal ah xaqiijiyeen in Taliyaha Booliska Xijaar uu amray taliyaha Booliska degmada Hodan uu la wareego Shiirkole.
Dhanka kale, Taliyayaasha ciidamada, ee ku heybta ah Sii-hayaha xilka Ra’iisu Wasaaraha, Rooble, ayaa afur loogu sameeyay caawa xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha halka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, uu dhankiisa kulan la leeyahay taliyayaal ku heyb ah.